အလုပ်လက်မဲ့ဘဝမှ . . . လန်ဒန်ရဲ့ နံပါတ်ဝမ်း ဂိုးသမားဆီသို့
ချဲလ်ဆီးအသင်းက ပေါင် ၂၂သန်းနဲ့ အသစ်စက်စက်ခေါ်ယူထားနိုင်တဲ့ ဂိုးသမားတစ်ဦးပါ။
“တစ်နှစ်လောက် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေခဲ့ဖူးတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်” - ဒီစကားကိုတော့ မန်ဒီက Goal.comနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောခဲ့တာပါ။
အလယ်လတ်တန်းစား ဆီနီဂေါမိခင်နှင့်ဂူနီယာဖခင်တို့မှ မွေးဖွားလာတဲ့ မန်ဒီဟာ စီးပွားရေးပညာကို အဓိကထား သင်ကြားခဲ့သူပါ။
ငယ်စဥ်က ဘတ်ဖွန်၊နူအာတို့ကိုလေးစားအားကျခဲ့ရသူ ဖြစ်ပြီး ဘရာဇီးအသင်းနဲ့အတူ ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ထွန်းတောက်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုက အကြိုက်ဆုံး ကစားသမားလို့လည်း သိရပါတယ်။
အသက် ၁၁နှစ်အရွယ်မှာ ဘရိုက်တန်မှာ ကျောင်းတက်ခဲ့ပြီးနောက် ပထမဆုံး ဘောလုံးအင်္ကျီအဖြစ် ဘရိုက်တန် ဂျာစီကို ဝတ်ဆင်ခဲ့သူလို့လည်းသိရပါသေးတယ်။
ဘောလုံးသမားဘဝ တကယ်စတင်ခဲ့တာကတော့ ပြည်တွင်း အကယ်ဒမီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်ကလီဟပ်အကယ်ဒ မီကျောင်းက ဖြစ်ပြီး အတော်ဆုံးဂိုးသမားတစ်ဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရဖူးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းကလပ် လီဟပ်မှာ ၅နှစ်ကြာ ကျင်လည်ခဲ့ပြီးနောက် ကလပ်အသင်းနဲ့အတူ နော်မန်ဒီဖလားကိုဆွတ်ခူး ကာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ အေအက်စ်ချားဘော့ဂျ်အသင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ရခဲ့ပါ တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ပြင်သစ်တတိယတန်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဂိုးသမားဘဝကို စတင်ဖို့ အခွင့် အရေးရခဲ့ပါတယ်။
“အသင်းကို သူရောက်လာချိန်က အသက် ၁၉နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။အသင်းမှာ သူ ၃နှစ်ကြာ ကစားခဲ့ပါတယ်။ ပထမရောက်လာတဲ့နှစ်မှာ သူကစားရပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့မှာက ဦးစားပေး ဂိုးသမားက ရှိပြီးသားဖြစ်ပါ တယ်။ဒါပေမယ့်လည်း သူ နောက်ထပ် ၂နှစ် အသင်းမှာ ဆက်နေပြီး ကစားပါသေးတယ်။သူ့အရည်အချင်းကို လူ တိုင်း သတိပြုမိကြပြီး သူ့ရဲ့ ကလပ်အသင်းအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊အသင်းဖော်တွေအပေါ်ထားတဲ့ သ ဘောထားတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ လိဂ်-၄ကို တန်းဆင်းသွားချိန်မှာ သူ့အနေနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ အသင်းမှာ ကစားချင်တယ်လို့ ဖွင့်ဟခဲ့ဖူးပေမယ့် သူအခွင့်အရေး မရလိုက်ပါဘူး။”လို့ ချားဘော့ဂျ် ဥက္ကဌ ဂျရတ် ဂိုလ်ဟယ်က ပြောပြပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ မာဆေးလ်အသင်းရဲ့ စတုတ္ထ ဂိုးသမားဖြစ်ခွင့်ရမယ့် အခွင့်အရေးအတွက် မန်ဒီဟာ ချား ဘော့ဂျ် ဥက္ကဌကို ခွင့်တောင်းခဲ့ချိန်မှာတော့ ဥက္ကဌက ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ရီးစ်အသင်းဥက္ကဌကသူ့ကို ဆက်သွယ်လာပြီး - “ဟေး မင်းမှာ မန်ဒီရှိတယ်ဆို၊ငါ ငါ့အသင်းရဲ့ ဒုတိယဂိုးသမားလိုနေလို့ မင်းဘယ်လိုထင်လဲ? ဆိုပြီး မေးလာတဲ့အကြောင်း ဂိုလ်ဟယ်က ဆက်လက်ပြောပြပါ တယ်။
“ကျွန်တော် တစ်ခွန်းတည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ယူလိုက်တော့. . တစ်ချိန်မှာ နံပါတ်တစ်ဂိုးသမားဖြစ်လာမှာ”လို့ ဂိုလ်ဟယ်က ပြောလိုက်တယ်တဲ့။
တကယ်လည်း မှန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာပါ၊မန်ဒီဟာ မကြာခင်မှာပဲ ရီးစ်အသင်းရဲ့ ပွဲထွက် ဂိုးသမားဖြစ်လာခဲ့ပါ တယ်။အဲ့နောက် ရန်းနက်စ်အသင်းရဲ့ အားကစားဒါရိုက်တာအိုလီဗီယာက ထပ်မြင်ပြီး ခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ချဲလ်ဆီးအသင်းက ထပ်မြင်ပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆိုခေါ်ယူတာဟာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပဲဟုလည်း ဂိုလ်ဟယ်က ဆက်လက်ဆိုပါတယ်။
မန်ဒီအနေနဲ့ အခုလို ဖြစ်မလာခင်မှာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ၂၂နှစ်အရွယ်မှာ သူ ချားဘော့ဂျ်အသင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်၊အမည်မဖော်ပြနိုင်တဲ့ အင်္ဂလန်လိဂ်ဝမ်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အေးဂျင့်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မအောင်မြင်လိုက်လို့အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်ပြီး မန်ဒီ အလုပ် လက်မဲ့ဖြစ်နေခဲ့ဖူးပါတယ်။
“အကောင်းတွေ၊အဆိုးတွေကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အများကြီး တွေးခေါ် ခဲ့ကြရ တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကောင်းဆုံး‌ ဖြေရှင်နိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားခဲ့ကြရပါတယ်။ကျွန်တော့်မှာ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရရင် ကစားသမားဘဝ အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ကျွန် တော့ မိသားစုကို ကျေးဇူးတင်လို့ကို မလောက်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော့် တစ်ဝမ်းခွဲအကိုအပါအဝင် ကျွန်တော့်အပေါ် ဘယ်တော့မှ မစွန့်လွှတ်ခဲ့သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”လို့ မန်ဒီက ဆိုခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ မန်ဒီဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် ချဲလ်ဆီးအသင်းကို ၅နှစ်စာချုပ်နဲ့ အပြီးသတ် ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါ ပြီ။
ချဲလ်ဆီးအသင်းမှာလည်း နံပါတ်တစ် ဦးစားပေး ဂိုးသမားဖြစ်ဖို့ စပိန်ဂိုးသမား ကီပါနဲ့ ယှဥ်ပြိုင်ရဖို့ရှိနေပါသေး တယ်။
ချဲလ်ဆီးအသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ လက်ရှိဂိုးသမား ကီပါ လက်စွမ်းကျဆင်းနေတဲ့အတွက် မန်ဒီကို အရေးပေါ် ခေါ်ခဲ့ တာဖြစ်တာကြောင့် မန်ဒီအနေနဲ့ အသင်းမှာ ပွဲထွက်ဂိုးသမားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် လက်စွမ်းကျနေတဲ့ ကီပါနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ခေါ်ခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားဖြစ်အောင်သာ စွမ်းဆောင်ပြဖို့ လိုပါတော့တယ်။
ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့အတူ ယခုနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်၊အက်ဖ်အေ၊ကာရာဘောင်နဲ့ ဥရောပ ချန်ပီယံ လိဂ် ဆုဖလားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေပါတယ်။